सर्वपल्ली राधाकृष्णन - विकिपिडिया
डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन (तमिल: சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன்; ५ सेप्टेम्बर १८८८ – १७ अप्रिल १९७५) भारतको प्रथम उप-राष्ट्रपति (१९५२ - १९६२) र द्वितीय राष्ट्रपति थिए। उनको जन्म दक्षिण भारतको तिरुत्तनि स्थानमा भएको थियो जुन स्थान चेन्नईबाट ६४ किमी उत्तर-पूर्वमा छ। उनको जन्मदिन (५ सेप्टेम्बर) भारतमा शिक्षक दिवसको रूपमा मनाईन्छ।
भारतको दोश्रो राष्ट्रपति
गुलजारी लाल नन्दा (प्रथम कार्यावधि)
गुलजारीलाल नन्दा (द्वितीय कार्यावधि)
प्रथम भारतको उपराष्ट्रपति
(१८८८-०९-०५)सेप्टेम्बर ५, १८८८
तिरुट्टनी, तमिलनाडु, भारत
अप्रिल १७, १९७५(१९७५-०४-१७) (८६ वर्ष)
५ छोरी तथा १ छोरा
राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, प्रख्याता
डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय सामाजिक संस्कृतिसँग रमेका एक महान शिक्षाविद महान दार्शनिक महान वक्ता र एक अस्थावान हिन्दू विचारक थिए। स्वतन्त्र भारत देशका उनी दोश्रो राष्ट्रपति थिए। डाक्टर राधाकृष्णनले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण ४० वर्ष शिक्षकको रूपमा व्यतीत गरे। उनमा एउटा आदर्श शिक्षकको सबै गुण रहेको थियो । उनले आफ्नो जन्म दिन शिक्षक दिवसको रूपमा मनाउने इच्छा गरेका ब्यक्त गरेका थिए जसको फलस्वरूप पुरै देशमा डाक्टर राधाकृष्णनको जन्म दिन ५ सेप्टेम्बरमा शिक्षक दिवस मनाईन्छ।
डाक्टर राधाकृष्णन समस्त विश्वलाई एउटा विद्यालय मान्थे। उनको शिक्षा द्वारा नै मानव मस्तिष्कको सदुपयोग गर्न सम्भव छ भन्ने उनको मान्यता रहेको थियो। डा. राधाकृष्णन आफ्नो बुद्धिमतापूर्ण व्याख्या, अभिव्यक्ति र हसाउने कथाहरूबाट आफ्ना छात्रहरूलाई मन्त्रमुग्ध गर्दथे। उनी छात्रहरूलाई उच्च नैतिक मूल्यहरूलाई आफ्नो आचरणमा उतार्न प्रेरित गर्दथे। उनी जुन विषय पढाउदथे, पढाउनु भन्दा पहिले स्वयं त्यसको राम्रो अध्ययन गर्दथे। दर्शन जस्तो गम्भीर विषयलाई पनि उनी आफ्नोको नवीनताबाट सरल र रोचक बनाउदथे।
पूर्व राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णनको जयन्ती प्रत्येक वर्ष ५ सेप्टेम्बरमा 'शिक्षक दिवस'को रूपमा मनाईन्छ। सन्‌ १९६२ मा जब उनी राष्ट्रपति बनेका थिए, त्यसबेला केही शिष्य र प्रशंसक उनकोमा गएका थिए। उनहरूले उनीसंग निवेदन गरेका थिए कि उनीहरू उनको जन्मदिनको शिक्षक दिवसको रूपमा मनाउन चाहन्छन भनी भनेका थिए । त्यस समय उनले भने, 'मेरो जन्मदिनलाई शिक्षक दिवसको रूपमा मनाउँदा निश्चय नै म आफुलाई गौरवान्वित अनुभव गर्नेछु।' त्यसबेला देखी ५ सेप्टेम्बर का दिन पुरै देशमा शिक्षक दिवसको रूपमा मनाईदै आएको छ।
शिक्षाको क्षेत्रमा डा. राधाकृष्णनले दिएको योगदान अविस्मरणीय छ। उनी बहुमुखी प्रतिभाको धनी थिए। त्यसकारण उनी एक विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त र शिक्षा शास्त्री थिए, तथापि आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा अनेक उच्च पदहरूमा काम गर्दा गर्दै पनि शिक्षाको क्षेत्रमा उनी आफ्नो योगदान गरी रहे। उनको मान्यता थियो कि यदि सही तरीकाबाट शिक्षा दिईयो भने समाजको अनेक खराबीहरूलाई मेटाउन सकिन्छ।
उनी भन्दथे जब सम्म शिक्षक शिक्षा प्रति समर्पित र प्रतिबद्ध हुदैन र शिक्षालाई एक मिशन मान्दैनन् त्यसबेला सम्म राम्रो शिक्षाको कल्पना गर्न सकिदैन। उनले धेरै वर्ष अध्यापन गरे। एक आदर्श शिक्षकको सबै गुण उनमा विद्यमान थियो। उनको भनाई थियो कि शिक्षक त्यस मानिसलाई बनाईनु पर्दछ जो सबभन्दा धेरै बुद्धिमान छ। शिक्षकले मात्र राम्रो प्रकारले अध्यापन गरेर नै सन्तुष्ट हुनुहुदैन उसले आफ्नो बिद्यार्थीको स्नेह र आदर अर्जित गर्नु पर्दछ। शिक्षक भएको भरमा सम्मान पाईदैन, त्यसलाई अर्जित गर्नु पर्दछ।
उनको मृत्यु सन् १९७५ सेप्टेम्बर १७ मा भएको थियो।
↑ Dr Sarvepalli Radhakrishnan: The Philosopher President, Press Information Bureau, Government of India 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन - जीवन र लेख (अङ्ग्रेजी मा)
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=सर्वपल्ली_राधाकृष्णन&oldid=1025091" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ३० जुन २०२१, ०८:३८
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०८:३८, ३० जुन २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।